Haddii aad ka walwalsan tahay la tirtiro macluumaad muhiim ah ka qalab Android aad, waxaa laga yaabaa in aad rabtid in aad sidoo kale si buuxda u soo laabtay keligood your computer, si aad mar walba u soo kaban karto. Ama waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad si fudud si ay u gudbiyaan sawiro ka yimid maalin xeebta gal your computer.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo ay jirto furan nidaamka Google Android ka hawlgala, waxaa jira software dhowr heli karaa oo ujeedadoodu tahay inay kaa caawiso maamulidda qalab Android aad dhex your computer. In this article, waxaan eegi doonaa qaar ka mid ah software maamulka ugu wanaagsan ee la heli karo software Android. Ogow in dhammaan software suurtogelin qalab aad in aad gebi gurmad rogtid oo aad computer la cable USB ah, iyo sidoo kale ogolaaday in doorashada ee files gaar ah u gal your computer. Laakiin, qaar ka mid ah yaa ka khayr badan oo kale.
1. Mobogenie - Wixii Windows 2. MoboRobo - Wixii Windows 3. Wondershare MobileGo for Android - Wixii Windows 4. Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) - Wixii Mac
1. Mobogenie - Wixii Windows
Uninstall barnaamijyadooda stock ku yaalla.
Interface Easy in la isticmaalo.
Si fudud soo dejisan iyo maarayn barnaamijyadooda.
Si fudud wareejiyo files badan ka PC aad Android, iyo qeybsanaan.
USB oo kaliya.
Xirmaan oo keliya mid ka mid ah qalab Android waqti.
Ma aha in dhafan music qaybsiga.
Raadi Mobogenie loo siiyaa biraawsarkaaga internet, download iyo waxa maamula, oo lagu xiro qalabka Android si aad u computer ah. Marka qalab aad ayaa xiran, waxaa laguu keenay in doonaa si loo soo dajiyo darawalka u ah qalab aad si codsiga waxaa si toos ah lagala soo bixi waxay u gal. Marka aad dhamaysato habkan, waxaad la qaadi doonaa si screen guriga:
Sida kale software maamulka xogta, waxaad kala soo bixi kartaa oo rakibi barnaamijyadooda gal qalab Android aad ka PC. Faa'iidada waa in barnaamijyadooda lagala soo bixi karaa si degdeg ah, iyo sidoo kale iyada oo aan aad ujecel marka la eego xogta la barqiyey eedeeyay.
Muuqaalka nidaamsan yahay awood u leh inay uninstall barnaamijyadooda iman preloaded telefoonka sida inta badan aan ka heli inaannu Chine in aanu marnaba isticmaali aynaan ka tirtiri kartaa.
Iibsiga ee sawir files yahay mid sahlan, iyo dhowr sawiro la xulan karaa your computer inay dajiyaan gal qalab aad hal mar, ama qeybsanaan.
2. MoboRobo - Wixii Windows
Taageer xiriir wireless ah qalabka on shabakad isku mid ah (in kasta oo dabci is-bedbeddela leh).
Taageero qalab kala duwan.
Download Apps u gal dhex dukaanka app.
Raadi MoboRobo ee internet browser aad, oo ka soo dejisan iyo waxa maamula. Marka furaan, waxaa laguu keenay in doonaa in lagu xiro qalabka Android aad la cable USB ah ama ka weyn WiFi, markaas kadibna hal mar ku xiran, waxaa lagu weydiin doonaa ogolaanshahaaga si loo soo dajiyo app ee qalabka Android aad sidoo kale aad.
Marka xiran, waxaa lagu dejin doonaa bogga garoonkeeda, aragto fursadaha ay u isticmaalaan qalab kala duwan iyo sidoo kale ku xiran iyada oo Wi-Fi.
Sida Mobogenie, mar aad ku jirto software ah, waa si caddaalad ah u fudud in ay maraan ku dhawaad, oo aad samayn karto wax kasta oo ka SMS ka PC diraya in ay barnaamijyadooda iyo xiriirada wareejinta. Si kastaba ha ahaatee, khasaare ah waa in maamulka oo aad music aad u baahan tahay si aad u dhan MP3 files aad kombuutarka oo iyaga u dhaqaaqin software- ma mid aad u xanibayo, laakiin sida aan ku arki doono xal sahlan jiraan.
3. Wondershare MobileGo for Android - Wixii Windows
Si fudud dhexgalaan oo dhan maktabadda Lugood leh click ah.
Ku dar khayraadka online badan iyo dukaamada app.
Shaqaynayaan si deg-iyo waa cajiib deggan.
In loo sahlo in ay qaataan Screenshot qalabka.
Beddelaan qaabab video.
Ma aha lacag la'aan ah (feedh 15 maalmood oo lacag la'aan ah). Si kastaba ha ahaatee, qiimaha aad aad hesho adeeg fog dhamaystiran oo dhaqso.
Page guriga ee Wondershare MobileGo for Android mar qalab aad ayaa ku xiran. U fiirso sida ay u soo bandhigay image la mid ah in uu yahay shaashadda ka mid ah qalab aad, suuragelinayo in aad qaadato Screenshot. Intaa waxaa dheer, oo ay la socdaan galeeysid menu bidix waxaad arki doontaa in ay xidhi karaan qalabka kala duwan, iyo sidoo kale fursad u helaan inay ka mid ilo web kale u soo degsado barnaamijyadooda.
Kooban oo ka mid ah qalabka ay bixiyaan MobileGo muujinaysaa sifooyinka dheeraad ah in wax walba oo software this provides- ku haboon waa in hal meel, oo waxaa oo dhan si habsami leh lagu daray in ay ka shaqeeyaan ka dhakhso badan software kasta oo kale, oo aad nafaha lagu waqtiga iyo tamarta.
MobileGo qoreysa qalab waxtar leh, sida ay doorasho De-nuqul, kaas oo si toos ah uu baaritaanku dhammaan xiriirada aad u aaminin yeelaan kasta, taas oo had iyo jeer waa mid dhib ku ah (aad inta badan aakhirka la xiriiro nuqul haddii aad u hagaagsan xiriirada aad la leedahay Facebook, iyo sidoo kale horay iyaga oo haysta on qalab aad, tusaale ahaan).
4. Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) ajrigooda Mac
Dhab ahaan baan u fiiriyey barnaamijyada lagu caawiyo in aad isticmaasho USB si ay u gudbiyaan files Android ka computer Windows ah. Hadda waxaan eegi doonaa xal yaa ugu Sugan kuwa Macs.
Waxaa ka jira dhowr barnaamijyada maamulka in ay kaa caawiyaan in aad ka Mac maamuli lahayd Android. The ugu caansan waa: Transfer Android File , Kies u Mac (loogu talagalay by Samsung ee telefoonada Samsung) , iyo WonderShare MobileGo for Android Pro (Mac) . Mushkiladdu waa mid, si kastaba ha ahaatee, qaar badan oo iyaga ka mid ah waa deganayn oo inta badan ay ku guuldareysato inay u heshaan qalabka Android aad.
Dhibic muhiim ah in la ogaado waa in si Transfer File Android inay ka shaqeeyaan oo dhan, Kies waa in aan loo rakibay on your device- si fudud u dhex dhigin ah "qashin" ma ku filan, waa in gebi ahaanba uninstalled. Waxaan ku talineynaa in la isticmaalayo CleanMyMac in this, kaas oo lagala soo bixi karaa lacag la'aan ah samayn. Dad badan ayaa ka raadi Google raadinta xal sababta Transfer File Android aan shaqayn, laakiin blogs aad u yar ama articles xusay tani faahfaahin muhiim ah. Laakiin, xataa haddii saxo, Transfer File Android weli waxay noqon kartaa aan lagu kalsoonaan karin.
Sidoo kale, Samsungs Kies u muuqataa in ay halkii ay "ku dhufo oo ka maqnaan" u dad badan, la forums iyo blogs muuqan faaloodayaal la halgamaya in ay ku xidhmaan qalabka ay dad badan.
Sababahan awgood, waxaannu ku talinaynaa in la isticmaalo Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) , sida ay tahay lagu kalsoonaan karo oo ku bixisaa interface fudud user-friendly kuu ogolaanaya inaad si ay u maareeyaan qalab Android aad si sahlan.
Marka aad soo bixi iyo software furay, lagu xiro qalabka Android aad via cable USB ah, waxaad u iman doonaan inay bogga hoos ku soo bandhigay. Laga soo bilaabo halkan, awoodo aad gurmad phone oo idil, iyo sidoo kale maamuli lahayd music, barnaamijyadooda, videos, sawiro iyo xiriirada.
phone oo idil, iyo sidoo kale maamuli lahayd music, barnaamijyadooda, videos, sawiro iyo xiriirada. Si fudud u maareeyaan dhan sawiradaada. Inta badan, marka fasax, aad sawiro qaar ka mid ah goobaha ugu yaab leh adduunka ugu qaadan doonaa. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in ay halis ugu badiyay, kuwaas oo sawiro cajiib ah, oo la Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac), si fudud iyaga oo aad dib kartaa ilaa aad Mac.
In la soo koobay, codsiyada software intaas oo dhammu waxay ku siin interface sahlan in la isticmaalo si loo caawiyo samayn iibsiga file Android la cable USB ka your computer. Su'aasha yimaado hoos haddii aad rabto in aad ka, si degdeg ah, adeeg la isku hallayn karo xoog leh waqti badan lagu badbaadinayo taas sii dheer waxaa ka mid ahaa in ay qiimo ah, ama aan la isku hallayn iyo gaabis ah. Waxaan ku talinaynaa version xorta ah ee Wondershare MobileGo for Android , kuu oggolaadaan in aad go'aan ka gaarto in ay qaab ka xoogbadan, oo qiimihiisu yahay kharashka.
Ka Nokia Demi Faylal ay si Android
> Resource > Android > Best 4 Software si ay u gudbiyaan Faylal ay si / ka Your Android Phone via Cable USB ah